प्रेमीले अर्कैसंग विवाह गर्न लागेको थाहा पाएपछि प्रेमिका नर्सले जे गरिन…. – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/प्रेमीले अर्कैसंग विवाह गर्न लागेको थाहा पाएपछि प्रेमिका नर्सले जे गरिन….
एजेन्सी । प्रेम सम्बन्धमा रहेकी एक नर्सले प्रेमीले अर्कैसंग विवाह गर्न लागेको थाहा पाएपछि ते जा व छ्या’पे’की छन् । घाइते प्रेमिको निधन भएको छ भने प्रेमीका पनि घाइते छन् । यो घटना भारत आगराको हो । आगराको राम र ताज शहरमा भएको यो घटना आजतकले लेखेको छ ।
प्रेमिकाले छ्यापेको ते जा व वाट घाइते प्रेमिको उपचारका क्रममा नि ध न भएको छ । आग्रा जिल्लाको हरिपर्वत पुलिस स्टेशनमा सो घटना बारे जानकारी आएको हो । सोनम नामकी केटीले देवेन्द्र नाम गरेकी प्रेमी माथि घटना गराएकी हुन् । पुलिसका अनुसार प्रेमीको बिहे अन्तै तय भएकाले प्रेमिका रि सा ए की थिइन् ।
आफ्नो प्रेमीसंग ब द ला लिनका लागि उनले घरको पंखा वि ग्रि ए को बहाना गरेर बोलाइन् । प्रेमी घर आउने बित्तिकै युवती सोनमले उनको प्रेमी देवेंद्रलाई ते जा व छ्या पि न ।
यस पछि घाइतेलाई सिंकदाराको अस्पतालमा भर्ना गरियो । उपचारका क्रममा उनको निधन भयो । पुलिसका अनुसार ती महिला आग्रामा रहेको निजी अस्पतालमा नर्सको रूपमा कार्यरत छिन् । त्यो युवक देवेंद्र प्रयोगशालामा सहायकको रूपमा काम गर्थे ।
प्रहरीले उक्त युवतीलाई प क्रा उ गरेको छ । युवतीलाई पनि सामान्य चो ट ला गे को छ । उनलाई पुलिसले अस्पतालमा भर्ना गरेको छ । प्रहरीका अनुसार सोनम र देवेन्द्र एक अर्कालाई लामो समयदेखि चिन्थे। उक्त युवक देवेन्द्र मूल रूपमा यूपीका बताइएको छ। युवती एक जिल्लाको बासिन्दा हुन् । दुबै जिल्लाहरू आग्रा नजिक छन् ।
यो पनि , बागमती प्रदेशमा आइतबार यता संक्रमित बढ्दै
बागमती प्रदेशका जिल्लामा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ । प्रदेशका जिल्लाहरूमा गरिएको आरटी–पीसीआर परीक्षणको क्रममा कोरोना सङ्क्रिमतको सङ्ख्या आइतबारयता बढेको छ । आइतबार प्रदेशभर ४४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएकोमा सोमबार ९६ जनामा देखिएकोमा मङ्गलबार बढेर १०३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको छ ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुरुषोत्तमराज सेढाईंले पछिल्ला दिनमा भएको राजनीतिक सभा सम्मेलन, भेला र नागरिकले सुरक्षित व्यवहार नगर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको जानकारी दिए । व्यवहार परिवर्तन चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै उनले पछिल्ला दिनमा नागरिकले मास्क लगाउन र भेला र भीडभाडमा दूरी कायम गर्नेतर्फ वास्ता गर्न छाडेकाले कोरोनाको जोखिम बढेको बताए ।
उनले कोरोना भाइरसको जोखिम र सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा रहे पनि अनियन्त्रित भएमा सरकारको प्रयास अपर्याप्त हुन सक्ने भएकाले रोकथाम आवश्यक भएको बताए । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरमा पीसीआर परीक्षण गर्दा गत शुक्रबार ५१, शनिबार ६२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको पाइएको थियो ।
शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाखभर बन्द गर्न सिफारिस
अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमा, फाइनल प्रवेशका लागि कोलम्बियासँग भिड्ने